Sanatar Xuseen: Eedeymaha ku xusan Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweynaha sal ayey ila leeyihiin – Kalfadhi
Sanatar Xuseen: Eedeymaha ku xusan Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweynaha sal ayey ila leeyihiin
Xildhibaan Xuseen Sh. Maxamuud: Waxaan soo dhaweynayaa Hindisaha Xil Ma Qaadista Madaxweynaha ay shaley soo jeediyeen Xildhibaano ka mid ah Golaha Shacabka. Sida uu qabo Qodobka 92-aad ee Dastuurka KMG ah, Madaxweynaha waxaa lagu soo eedeyn karaa inuu galey Qiyaano Qaran ama xad-gudub culus oo Dastuuri ah.
Waxay aad ay iigula muuqataa in eedeymaha ku xusan Soojeedinta Xildhibaanada ay dhamaantood yihiin kuwo sal leh, balse cidda awoodda u leh ayaa xaqiijin karta. Waxaan rajeynayaa in Madaxweynaha uu u hogaansamo islamarkaana horseed ka noqdo in nidaamka lagu kala baxo.
Su’aasha isweydiinta leh ayaa ah: yaa galaya dacwaddan maadaama Maxkamaddii Dastuuriga aysan sameysneyn, sababta goor hore loo sameyn waayeyna ayba iska caddahay? Aniga aragtideyda, waxaa la mari karaa saddex xulasho middood:
1) In toos ay labada gole u bilaabaan doodda hindisaha, codna geliyaan;
2) In Aqalka Sare uu galo dacwadda inay sal dastuuri ah leedahahay iyo in kale iyo
3) Tan saddexaad oo ah in Maxkamadda Sare ay qaaddo dacwada.
Gabagabadii, waxaan ku baaqayaa iney dhinacyadu illaaliyaan Dastuurka iyo Shuruucda Dalka, lagana shaqeeyo sidii dacwadan dhinac loogu ridi lahaa, si aaney dib u dhac ugu keenin howlaha u yaala Baarlamaanka iyo Xukuumadda.
Guddoomiye Cawad oo ka digay in Xarumaha Golaha Shacabka si gaara loo isticmaalo
Rugta Ganacsiga Soomaaliya oo ku baaqeysa in la joojiyo Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweynaha